ETU ESI CHOPUTA NTINYE OGUGU MGBE Ị NA-AHAZI USORO MGBAWA NA NTFS - KỌMPUTA EGWU - 2019
Iji jikọọ na kọmputa ndị ọzọ, TeamViewer anaghị achọ ntọala firewall ọzọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, usoro ihe omume ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na a na-ekpo ọkụ na netwọk.
Ma n'ọnọdụ ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ, na gburugburu ụlọ ọrụ na iwu nchedo siri ike, enwere ike ịmepụta firewall ka a ghara igbochi njikọ niile ọpụpụ. N'okwu a, ị ga-ahazi nchekwa ahụ ka o kwe ka TeamViewer jikọọ na ya.
Usoro nke iji ọdụ ụgbọ mmiri na TeamViewer
TCP / UDP n'ọdụ ụgbọ mmiri 5938 Nke a bụ ọdụ ụgbọ mmiri isi maka usoro ihe omume ahụ. Firewall na PC gị ma ọ bụ netwọk mpaghara ga-ekwe ka ngwugwu dị n'ọdụ ụgbọ mmiri a.
TCP ọdụ ụgbọ mmiri 443 Ọ bụrụ na TeamViewer apụghị ijikọta site n'ọdụ ụgbọ mmiri 5938, ọ ga-anwa ịbanye site na TCP 443. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ Ngwá Ọrụ TeamViewer na-eji TCP 443, dịka ọmụmaatụ, iji chọpụta maka mmelite mmemme.
TCP ọdụ ụgbọ mmiri 80 Ọ bụrụ na TeamViewer apụghị ijikọta ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri 5938 ma ọ bụ 443, ọ ga-agbalị ịnwa ọrụ site na TCP 80. Nwekọrịta njikọ site n'ọdụ ụgbọ mmiri a bụ nwayọọ na enweghị ntụkwasị obi n'ihi na ọ na-eji mmemme ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ihe nchọgharị, na site na n'ọdụ ụgbọ mmiri adịghị ejikọta ya na akpaghị aka ma ọ bụrụ na agbajiri njikọ ahụ. Maka ihe ndị a, TCP 80 na-eji naanị dị ka ihe ikpeazụ.
Iji mezuo iwu nchebe siri ike, ọ bụ iji gbochie njikọ niile na-abata ma kwe ka ọpụpụ site n'ọdụ ụgbọ mmiri 5938, n'agbanyeghị na adreesị IP na-aga.